Tag: suldaan seeraar
Wargeyskooda cad ee ku saabsan Suuqgeynta Dad-ku-saleysan, Atlas waxay ku bixisaa tirokoobyo xiiso leh oo ku saabsan suuq-geynta iyo xayeysiinta ku saleysan dadka. Intii aad waqti badan ku bixisay mobilka guud ahaan, 25% dadku waxay isticmaalaan 3 ama in ka badan aalado maalintii, iyo 40% dadku waxay aaladaha u beddelaan si ay u dhammaystiraan hawl Maxay tahay Suuq-geynta Dadku? Barnaamijyada iyo barnaamijyada qaarkood waxay siiyaan xayeysiistayaasha awood ay ugu soo gudbiyaan rajada ama liisaska macaamiisha si ay ula mid noqdaan kuwa isticmaala labada. Liisaska waa la soo gelin karaa oo la waafajin karaa isticmaaleyaasha
Sida tufaax iyo farmaajo, Email iyo Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada
Talaado, Oktoobar 28, 2014 Axad, Oktoobar 26, 2014 Douglas Karr
Waan jeclahay xigashada ka timid Tamsin Fox-Davies, Maareeyaha Sare ee Horumarinta ee Constant Contact, oo sharraxaya xiriirka ka dhexeeya warbaahinta bulshada iyo suuqgeynta emailka: Warbaahinta bulshada iyo suuqgeynta iimaylka waa sida farmaajo iyo tufaax. Dadku uma maleynayaan inay isla socdaan, laakiin dhab ahaantii waa lamaanayaal qumman. Warbaahinta bulshada waxay gacan ka geysaneysaa kordhinta gaadhista ololeyaasha emaylkaaga waxayna dhisi kartaa boostadaada. Dhanka kale, ololeyaal emayl wanaagsan ayaa sii xoojin doona xiriirka aad la leedahay xiriirada warbaahinta bulshada, oo aad u jeesan doonto
Mid ka mid ah qoraalladii ugu badnaa ee aan waligeen qornay waxay ku saabsanayd waxa ay tahay falanqaynta iyo noocyada aaladaha gorfaynta ee la heli karo si ay uga caawiyaan suuqleyda inay la socdaan waxqabadkooda, falanqeeyaan fursadaha horumarinta, iyo cabbiraadda jawaabta iyo habdhaqanka isticmaalaha Laakiin waa maxay qalabka ay suuqleyntu adeegsanayaan? Sida laga soo xigtay sahanka ugu dambeeyay ee 'Econsultancy', Marketers waxay adeegsadaan gorfaynta webka si aad ah, ka dibna Excel, falanqaynta bulshada, falanqaynta moobiilka, A / B ama tijaabooyin kala duwan, keydadka macluumaadka (SQL), aaladaha sirdoonka ganacsiga, maareynta tag, xallinta astaamaha, otomaatiga ololaha,
Econsultancy waxay soo saartay Warbixintooda Miisaaniyadeed ee 2014 Warbixin iyadoo lala kaashanayo Responsys. Waxay ku bixiyeen macluumaadkan oo dhameystiran natiijooyinka xogta sahanka. Suuqleyda (60%) waxay u badan tahay inay kordhinayaan miisaaniyadooda guud ee suuq geynta sanadka soo socda marka loo eego wakhti kasta tan iyo markii ay bilaabeen Warbixintoodii ugu horreysay ee Miisaaniyadda Suuqgeynta inta lagu gudajiray heerka dhibaatada dhaqaale. In kabadan 600 oo shirkadood (inta badan UK), ayaa kaqeyb qaatay cilmi baaristaan, oo qaadatay qaab
Arbacada, Nofeembar 6, 2013 Talaado, Nofeembar 5, 2013 Douglas Karr
Daabacaaddii ugu horreysay ee warbixintii 'SoDA' ee 2013 waxay hadda ku dhowdahay ku dhowaad 150,000 oo muuqaal iyo soo dejin ah! Qaybta labaad ee daabacaadda ayaa hadda diyaar u ah in la daawado. Daabacaaddan waxaa ku jira iskudhaf cajiib ah oo ka kooban qaybaha hoggaanka fikirka, wareysiyo xeel dheer iyo shaqo abuur runtii loo abuuray noocyada sare sida Nike, Burberry, Adobe, Whole Foods, KLM iyo Google. Qaadhaan-bixiyeyaasha waxaa ka mid ah qorayaal caan ah oo marti-sharaf ah oo ka socda noocyada buluug-bulsheed, la-talinno iyo bilaabis cusub oo hal abuur leh, iyo sidoo kale iftiimiyayaal ka socda SoDA